Imithetho Yezidakamizwa yase-UAE: Izinhlawulo Zokuxhashazwa Kwezidakamizwa kanye Namacala Okushushumbisa e-UAE
Izinhlawulo Zokuxhashazwa Kwezidakamizwa kanye Namacala Okushushumbisa e-UAE
Imithetho Yezidakamizwa Yase-UAE: Isijeziso Nezinhlawulo Zokushushumbiswa Kwezidakamizwa
Ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kungenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu umphakathi wanamuhla obhekene nazo. Sekuphenduke inkinga yomhlaba wonke, cishe wonke amazwe abhekene nemiphumela emibi. Ububi bube yingozi kubantu ngabanye nasemphakathini, ikakhulukazi intsha. Futhi kuwusongo ekumisweni komndeni, nokuwohloka kwemindeni eminingi okubangelwa ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa.
Ngeshwa, inkinga yokusetshenziswa kwezidakamizwa kube nzima ukuyiqeda emazweni amaningi njengoba ixhumene nobugebengu obuhleliwe, obuhlanganisa ukushushumbiswa kwezidakamizwa nokushushumbisa imali. Empeleni, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa sekuwumqedazwe omubi kangangokuthi kuwusongo ekuphepheni nasekuvikelekeni kwezwe amaningi. Njengamanye amazwe, i-United Arab Emirates nayo ibe nengxenye yayo efanelekile yokusebenzisa kabi izidakamizwa kanye nezinkinga zokushushumbiswa kwabantu.
Usongo lokusebenzisa kabi izidakamizwa kanye nokushushumbiswa kwezidakamizwa e-UAE luhlanganiswe nendawo eyingqayizivele yezwe kanye nokukhangayo njengendawo yebhizinisi nendawo yabokufika kanye nezivakashi. Ngokuvamile, njengekhaya labantu abavela ezizweni ezihlukahlukene, i-UAE ayikwazi ukuzihlukanisa nenkinga yomhlaba wonke yokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ukwengeza, izingxenye zobugebengu zisebenzise izinqubomgomo ezivulekile ze-UAE zohwebo lwamazwe ngamazwe ukuze zishushumbise izidakamizwa zeqe imingcele yayo. Thola ukuthi yiziphi izidakamizwa ezingekho emthethweni e-UAE, izinhlawulo eziqinile nezijeziso zokusebenzisa izidakamizwa nokuba nazo, ukushushumbiswa, ukukhiqizwa nokusabalalisa.
Imithetho ye-UAE's Abuse Drug and Trafficking
I-UAE inenqubomgomo yokungabekezeleli ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokushushumbiswa. I-UAE's Federal Law No. 14 ka-1995 (I-Narcotic and Psychotropic Law) ibeka izijeziso ezinzima kunoma ubani otholakala enecala lokungenisa, ukuthumela ngaphandle, ukuthutha, ukusebenzisa, ukuphatha, noma ukugcina izidakamizwa nezinye izinto ezinqatshelwe.
Umthetho wombuso uhlukanisa izidakamizwa zibe ngamaqembu amabili, okuhlanganisa;
Izidakamizwa zenarcotic, okuhlanganisa insangu noma insangu, i-cocaine, i-heroin, i-methadone, i-opium, ne-nicomorphine
Izinto ze-Psychotropic, okuhlanganisa i-aminorex, i-butalbital, i-ethinamate, ne-barbital
Nakuba izinhlawulo zokusebenzisa kabi izidakamizwa zihlanganisa izigwebo ezithile zasejele kanye nenhlawulo kuye ngohlobo lwesidakamizwa, i-United Arab Emirates ichibiyele imithetho yayo ukuze isungule Uphiko Lokwelapha Umlutha. Lolu phiko lufana nesikhungo sokuhlunyeleliswa kwezimilo lapho uhulumeni enikezela khona ukusiza imilutha yezidakamizwa abasolwa ohambweni lwabo lokululama kanye nokubuyiselwa emphakathini. Nokho, ukudluliselwa nokwamukelwa oPhikweni kungokuzithandela.
Isijeziso Sokushushumbiswa Kwezidakamizwa e-UAE
Ngokungafani nezigebengu zokusebenzisa kabi izidakamizwa, abantu abatholwa benecala lokushushumbisa izidakamizwa e-UAE, okuhlanganisa ukungenisa nokuthumela ngaphandle kwezidakamizwa, babhekana nezijeziso ezinzima kakhulu. Ezinye zezinhlawulo zokushushumbisa nokuphromotha izidakamizwa ezingekho emthethweni e-UAE zihlanganisa:
isigwebo sasejele esiphakathi kweminyaka eyishumi neshumi nanhlanu kanye nenhlawulo engekho ngaphansi kuka-Dh20,000 kunoma ubani otholakala enecala lokuphatha noma lokusungula indawo yokusetshenziswa kabi kwanoma yiziphi izidakamizwa ezidakayo noma ezithinta ingqondo njengoba kuchazwe ngaphansi koHlelo 1, 2, 4, no-5 womthetho weNarcotic and Psychotropic
ukuboshwa phakathi kweminyaka eyisikhombisa neshumi kanye nenhlawulo engekho ngaphansi kuka-Dh20,000 kunoma ngubani otholakala enecala lokuphatha noma lokusungula indawo yokusebenzisa kabi noma yiziphi izidakamizwa ezidakayo noma ezithinta ingqondo njengoba kuchazwe ngaphansi koHlelo 3, 6, 7, no-8 I-Narcotic and Psychotropic Law
isigwebo sejele esiphakathi kweminyaka eyishumi neshumi nanhlanu kanye nenhlawulo engekho ngaphansi kuka-Dh50,000 kunoma ubani onecala lokushushumbisa izidakamizwa noma ukukhuthaza
isikhathi sokuboshwa esiphakathi kweminyaka eyisikhombisa neshumi kunoma ubani onecala lokwethula, ukungenisa, ukuthumela, ukuthumela, ukukhiqiza, ukukhipha, noma ukukhiqiza noma yiziphi izidakamizwa ezidakayo noma izinto ezithinta ingqondo ezisohlwini olukuSheduli 3, 6, 7, no-8 ye-Narcotic and Psychotropic Law.
Uma umuntu etholakala enecala lokwenza noma yimaphi amacala angenhla ngenhloso yokushushumbisa noma yokukhushulwa esikhundleni, uyoboshwa udilikajele kanye nenhlawulo ephakathi kuka-Dh50,000 no-Dh200,000.
Ngaphandle kwalezi zinhlawulo, i-UAE iphinda ibeke izinhlawulo ezinzima emisebenzini ye-inthanethi noma ye-inthanethi ekhuthaza ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa noma ukushushumbiswa, okuhlanganisa nokuphatha iwebhusayithi ehloselwe ukugqugquzela ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa noma ukushushumbiswa. Abantu abanecala babhekene nokuboshwa isikhashana njengoba kunikezwa emithethweni ye-inthanethi ye-UAE, inhlawulo ephakathi kwesigidi esingu-Dh500,000 ne-Dh1 noma zombili izinhlawulo.
Ukwengeza, i-UAE iphakathi kweqembu elincane lamazwe lapho ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa noma icala lokushushumbisa lingase lihehe isigwebo sentambo. Izivakashi, okuhlanganisa izivakashi kanye nabasebenzi abavela kwamanye amazwe, babhekana nokudingiswa unomphela ngaphezu kwezinhlawulo eziqinile ezikhona zokusebenzisa kabi izidakamizwa kanye namacala okushushumbisa. Kodwa-ke, i-UAE ivumela ukutholakala kwezidakamizwa ezinqunyiwe kubantu abavakashela izwe.
I-UAE ibeka izinhlawulo ezinzima
Ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nokushushumbiswa kwezidakamizwa kuyinkinga enkulu yomhlaba wonke, njengoba amazwe amaningi, okuhlanganisa ne-UAE ebeka izinhlawulo eziqinile zokusebenzisa kabi izidakamizwa kanye namacala okushushumbisa. Ngokukhula kwesibalo sabantu bakwamanye amazwe e-UAE, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nokushushumbiswa kwabantu kubonakale kuyinselelo enkulu ngaphandle kwemithetho yamazwe yokungabekezeleli lutho. Ngaphandle kwezinhlawulo eziqinile kwesinye isikhathi eziyimpikiswano, i-UAE iphinde yathatha ezinye izinyathelo zokulwa nenkinga yokusebenzisa kabi izidakamizwa, okuhlanganisa nokusungula Iyunithi Yokwelapha Efana Nokuvuselela Ukulutheka. Nokho, kusenezindawo zokuthuthukiswa, okuhlanganisa ukubukeza imihlahlandlela yokuthi yiluphi uhlobo lwezidakamizwa okufanele luvunyelwe ukungena ezweni.
Uchwepheshe Ummeli Wezidakamizwa e-Dubai
Ingabe ubhekene Nezijeziso Zokuxhashazwa Kwezidakamizwa kanye Namacala Okushushumbisa e-UAE? Kuwubugebengu bombuso ukungenisa, ukuthekelisa, ukuphatha, ukukhiqiza, noma ukubhekana nezidakamizwa ezingekho emthethweni e-UAE. I-UAE inenqubomgomo yokungabekezeleli lutho mayelana nokushushumbiswa kwezidakamizwa. Ubugebengu bokushushumbisa izidakamizwa bungabangela ukuboshwa, izinhlawulo ezinkulu kanye nokudingiswa.
Abameli UAE inikeza iseluleko sezomthetho, usizo, kanye nokumelela Izinhlawulo Zokuxhashazwa Kwezidakamizwa kanye Namacala Okushushumbisa e-UAE. Abameli bethu bangochwepheshe beMithetho Yezidakamizwa ye-UAE futhi banolwazi olunzulu ekusingatheni ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa namacala okushushumbisa. Xhumana nathi namuhla ukuze uthole ukubonisana!
Sishayele manje ukuze uthole isikhathi sokuqokwa nokubonisana nabameli bethu abakhethekile Bezidakamizwa kanye Nobugebengu ku- +971506531334 +971558018669